Bilayska Galkacyo oo xabadeeyey gaari joogsan waayey bar kontarool & darawalka gaariga oo ku dhaawacmay. – Radio Daljir
Galkacyo, Nov 17 – Weriye Maxamed Yaasiin Isxaaq ayaa caawa uu dhaawac ka soo gaaray xabado ay ciidanka bilayska ee magaalada Galkacyo ku rideen gaari uu watay oo joogsan waayey bar kontarool oo u tiil ciidanka mid ka mid ah wadooyinka magaalada Galkacyo.
Gaariga ayaa la sheegay in uu joogsan waayey bar kontarool, taasina ay sababtay in ciidanka bilaysku in ay xabad ku furaan.
Dhawr xabadood ayaa ku dhacay gaariga, walow aan la hubin inta uu le’eg yahay khasaaraha soo gaaray darawalka & rakaabka kale ee saaraa gaariga.
Wariye Isxaaq oo VOA-da uga soo warama Galkacyo ayaa la geeyey mid ka mid ah cisbitaalada magaalada Galkacyo, lana sheegay in xaaladiisu ay hadda deggan tahay.
Lama oga waxa sababay in uu jiiro kontaroolka ciidanku ay ku sugayeen amniga magaalada.
Todobaadadii la soo dhaafay ayaa ciidanka bilayska ee magaalooyinka waaweyn ee Puntland ay habeenkii roondo ka qabtaan xaafadaha magaalooyinka, iyada oo ay baro kontaroola ahna ay ka samaysteen meelo cayiman si loo sugo falal-dambiyeedyo in dhawaale ka dhacayey magaalooyinka Puntland.
Bilayska magaalada Galkacyo oo aan ka waraysanay dhacdadan ayaa sheegay in gaari xawaare ku soconayaa uu isku dayey in uu jiiro bar kontarool, bilayskuna ay isku dayeen in ay joojiyeen, markii uu joogsan waayeyna ay khasabtay in ay xabad ku joojiyaan, maadaama aanay garanayn cidda wadatay gaariga iyo qasdiga laga lahaa toona.
Asxaabta iyo qaraabada wariye Isxaaq oo aan la xiriiray ayaa sheegay in dhaawac xumi uu soo gaaray, aanayna ogaan karin xaaladiisu sida ay noqon doonto inta laga xaqiijinayo baaxada dhaawaca soo gaaray.
Shalayna is-afgaranwaa ayaa soo kala dhex galay ciidanka ilaalada u ah madaxda gobolka iyo wariyayaasha magaalada Galkacyo oo ku eedeeyey ilaalada madaxda gobolku in ay dhibaateeyeen suxufiyiin danaynayey shir lagu gorfaynayo amniga gobolka oo ka furmay Aqalka Gobolka ee Galkacyo.